Akporo ekwentị: Ị nwere ike na nkwado ma weghachite ya na 1 click iche iche
1. ndabere Android Data
1.1 ndabere SMS
1.2 ndabere Ndi ana-akpo
1.3 ndabere Photos
2. ndabere Android ka PC
3. ndabere & Weghachi Android
4. ndabere ROM / femụwe
5. Android ndabere Ngwaọrụ
5.1 Android ndabere software
5.2 Android ndabere égwu
Chọrọ ndabere gị Android ekwentị tupu iweghachi ya ụlọ ọrụ ntọala ma ọ bụ dịrị ya? Ina-eji na-eme a mgbe Android ndabere bụrụ na ị nwere ike ihichapụ ma ọ bụ hapụ data mmadụ na mberede? Ekele, e nwere ọtụtụ ụzọ na-abịa maka enyemaka gị. Ke ibuotikọ emi, ga-amasị m na-egosi gị 3 ụzọ ime a ndabere maka Android effortlessly.
Method 1. nkwado ma weghachite Android SD Kaadị Iji aka Method 2. nkwado ma weghachite Android na 1 Pịa na a Ngwá Ọrụ Method 3. Android ndabere na Iweghachi na a Google Akaụntụ
Method 1. nkwado ma weghachite Android SD Kaadị Iji aka
Dị ka ị maara, Android ekwentị nwere ike ndokwasa dị ka ihe mpụga ike mbanye na Windows kọmputa. The SD kaadị gị Android ekwentị bụ mfe inweta. Dabere na nke a, ị nwere ike mfe na nkwado ma weghachite music, video, foto na akwụkwọ faịlụ na Android na kọmputa site na oyiri-tapawa. Ugbu a na-eje ije site na mfe nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị Android na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Ozugbo kọmputa na-achọpụta rụọ na ghotara gị Android ekwentị, gị Android ekwentị ga-ndokwasa dị ka ihe mpụga ike mbanye.
Rịba ama: N'ihi na Mac ọrụ, ị chọrọ nwụnye Android File Nyefee na Mac na mgbe ahụ jikọọ gị Android ekwentị Mac.
Nzọụkwụ 3. Go ịchọta gị Android ekwentị na kọmputa na imeghe ya.
Nzọụkwụ 4. Dị ka ị na-ahụ, ndị niile nchekwa na faịlụ echekwara na SD kaadị na-e. Mepee ndị a nchekwa aha ya bụ Music, Photos, DCIM, Videos, wdg ma detuo gị chọrọ faịlụ na nkwado ndabere na mpaghara ha ka ha na kọmputa.
Cheta na: I nwekwara ike ndabere ihe niile na SD kaadị kọmputa. Otú ọ dị, ụfọdụ ọdịnaya, dị ka ngwa ọdịnala, ga-mebiri emebi mgbe ị weghachi.
Method 2. nkwado ma weghachite Android na 1 Pịa na a Ngwá Ọrụ
Na nke a, m na ikwu na ị na a onye-nkwụsị Android ndabere ngwá ọrụ gị. Ọ bụ Wondershare MobileTrans. N'okpuru ebe a bụ ya mmeghe na mfe nzọụkwụ nkwado ndabere na mpaghara. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe gị ezigbo ndabere ngwá ọrụ, i nwere ike ịgụ kasị mma 5 Android ndabere software na kasị mma 5 Android ndabere ngwa.
Best ndabere software maka Android nkwado ndabere na mpaghara Android enweghị dịrị!
Ndabere nile ngwa, ngwa data, kọntaktị, SMS, photos, music, videos nakwa dị ka oku na ndekọ na oge.
Ndabere kọntaktị ahọrọ, SMS, ngwa, music, videos, foto na dọkụmentị na kọmputa.
Wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ma weghachi ọ bụla na-akwado Android ekwentị.
Arụ ọrụ nke ọma na Samsung, Sony, Google, HTC, Motorola, LG, Huawei, ZTE, wdg
N'enweghị nkwado ndabere na mpaghara na-enweghị ọ bụla mma ọnwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ka PC
Nke mbụ niile, wepụ ihe Android eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa. Ẹkedori nkwado ndabere na mpaghara software maka Android na kọmputa, ị ga-ahụ bụ isi window nke usoro ihe omume dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 2. Do Android Full na nkwado ndabere na 1 Pịa ma ọ bụ selectively
Ke akpan window, pịa "ndabere gị ekwentị". Nke a software-enye gị ohere ndabere ozi, kalenda, video, music, photos, oku na ndekọ, ngwa. Wezụga ya, ọ ọbụna na-ahapụ gị ndabere Android ngwa data enweghị mgbọrọgwụ.
Dị nnọọ họrọ gị chọrọ data na ego igbe n'ihu yawee pịa "Malite Copy" na-amalite akwado. Jide n'aka bụghị ịkwụpụ gị Android ekwentị na nkwado ndabere na mpaghara usoro. Otu ụbọchị, mgbe gị data na-ọnwụ, ị nwere ike iweghachi ndị a data gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 3. Weghachi nkwado ndabere na mpaghara File na ekwentị gị
E wezụga ihe niile-na-otu ndabere, a Android ndabere ka PC software na-ahapụ gị weghachi kwadoo ekwentị gị mgbe i nwere mkpa. Ọ bụghị nanị na Android ngwaọrụ, ma-enye gị ohere weghachi ya na gị na iOS ngwaọrụ. Ihe niile ị chọrọ ime na-ị na-ahọrọ "Weghachi si Backups" wee họrọ "MobileTrans". Mgbe ahụ ị pụrụ họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji weghachi ngwaọrụ gị n'ihu.
Method 3. Android ndabere na Iweghachi na a Google Akaụntụ
Dị ka sobtaitel-atụ aro, akụkụ a na-elekwasị anya na-agwa gị otú ị ndabere Android ekwentị na ígwé ojii. Mgbe ahụ, ọbụna ma ọ bụrụ gị Android na ezuru ekwentị ma ọ bụ agbajikwa, ị nwere ike mfe na-data azụ. Nkwado ndabere na mpaghara Android ekwentị na ígwé ojii, nke mbụ niile, eleghị anya ị ise nkwado si Google. E wezụga Google, e na ụfọdụ ngwa ọdịnala na-eme ka ígwé ojii ndabere maka Android.
Ọtụtụ gam akporo igwe na-enye gị ike na-ndabere kọntaktị, kalenda, WiFi paswọọdụ na ndị ọzọ ka gị na Google akaụntụ. Mgbe ọ bụla ị chọrọ, ị nwere ike nweta ha azụ na ala.
Ndabere Android Kalinda na Ndi ana-akpo
Na gị Android ekwentị, mgbata Ntọala> Accounts na mmekọrịta. Banye gị Google akaụntụ. Tinye akà rà mmekọrịta kọntaktị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ndabere Android kalenda, ị nwere ike nne Mmetụta mmekọrịta kalenda.
Ndabere Android Ntọala
Gaa Ntọala na mgbe ahụ ndabere na tọgharịa. Mgbe ahụ, nne Mmetụta Back m elu data. Site n'ime nke a, na ị na-enwe ike ndabere ngwa data, WiFi paswọọdụ na ntọala Google nkesa.
Import Ndi ana-akpo ka akporo ekwentị / Tablet
Manager ngwa ọdịnala na Your akporo ekwentị effortlessly
Nyefee faịlụ site iPhone ka Android
Nyefee na Ndi ana-akpo na New akporo ekwentị
Nyefee Outlook Ndi ana-akpo ka Android
Best Android File Nyefee Alternative
Top 3 iTunes Alternative maka Android
Olee ka ibugharịa Text on iPhone na Android
Otú nyefee Pictures site na kọmputa na-Android
> Resource> Android> 3 ụzọ na nkwado ma weghachite akporo ekwentị effortlessly